Tijaabada xawaaraha ee udhaxeysa iPhone 7 Plus iyo Google Pixel XL | Wararka IPhone
Tijaabada xawaaraha ee udhaxeysa iPhone 7 Plus iyo Google Pixel XL
Google waxay soo bandhigtay Oktoobar 4 Google Pixel iyo Google Pixel XL, boosteejooyin ay la rabto inay si buuxda u gasho heerka ugu sarreeya oo ay u istaagto Samsung iyo Apple labadaba, shirkadaha kaliya ee sanadba sanadka ka dambeeya sii wataan kuwa ugu sarreeya taleefanka gacanta. Inbadan waxay ahaayeen shirkadihii isku dayay laakiin cidna ilaa iyo hada kuma guuleysan. Maaddaama Google Pixel uu bilaabay inuu gaaro adeegsadayaasha ugu horreeya, YouTube ma joojinayo isbarbardhiga Pixel-ka labada Samsung iyo Apple.
Shalay lamaanahayga Miguel, wuxuu ku tusay isbarbardhig aan ku aragnay sida labada terminaal, Google Pixel iyo iPhone 7 Plus loo horumariyo, markay kamaradu tahay jilaaga tijaabada. Maalmo ka hor waxaan sidoo kale ku tusnay adkaysiga biyaha ee Google Pixel, kaasoo awoodo inuu ku hoos jiro biyaha ugu yaraan 30 daqiiqo. Sida laga soo xigtay Google, degdega ah in la bilaabo terminalkan sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah ayaa dhiirrigelisay in caabbinta biyuhu aysan ka sarreyn tan qalabka.
Munaasabaddan, waxaan ku tusineynaa tijaabo xawaare ah oo aan ku arki karno waqtiga fulinta codsiyada ugu badan ee loo adeegsado nidaamka deegaanka, iyo sidoo kale qaar ka mid ah cayaaraha inta badan qaata kan ugu dheer. Sida aan u aragno imtixaanka, laablaab, kan ugu horreeya ee iyaga iPhone waxay qaadataa 1:24 daqiiqo si ay u socodsiiso dhammaan codsiyada halka Google Pixel XL ay qaadato 1:47 daqiiqo. Wareega labaad, markii codsiyada horey loo sii sameeyay oo ay ku jiraan xusuusta aaladda, waxaan arki karnaa sida iPhone-ka uu u qaadanayo wadarta 1:51 daqiiqo halka Google Pixel uu adeegsado 3 daqiiqo iyo 5 ilbiriqsi guud ahaan.
Google Pixel waxaa maamula Snapdragon 821, 4 GB oo xasuusta RAM ah wuxuuna leeyahay qaraar dhan 2560 × 1440 halka iPhone 7 uu leeyahay 3 GB oo RAM ah waxaana maamula processor-ka A10Fusion. Shaashadda terminal-ka waxay na siineysaa xallinta 1920 × 1080.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 7 » Tijaabada xawaaraha ee udhaxeysa iPhone 7 Plus iyo Google Pixel XL
Awood aan la xakamayn…. Waa ku habboonaanta nidaamka qalliinka. IPhone-ka ayaa ka awood iyo dhaqso badan iyada oo aan qalab badan lahayn.
Sida loogu sahlo digniinta LED-ka ogeysiisyada
Barnaamijyada dib u hagaajinta sawirka